Voalazan’ny tantsaha eny an-toerana izay tojo ny mpanao gazetinay fa nisy fiantraikany tamin’ny fambolena teny an-tsaha ny rotsak’orana sy ny tondra-drano teo aloha teo ka nampihena ny tolotra teny an-tsena. Tsy nifandanja tokoa mantsy ny tolotra sy ny tinady ka nidangana be ny famarotana ireo karazana fangaron-daoka na amin’ireo tsenan’ny tantsaha na ny eny ambony latabatra na any amin’ny toeran-kafa. Nanararaotra izany ireo tontakely ka manao latsak’alina na tsy matoy aza ny vokatra.
Voalaza moa fa sarotra ny hiandry fambolena eny an-tsaha amin’ny alina. Misy amin’ireo efa notetevana loko kely ihany, tahaka ny voankazo saingy tsy hita eny amin’ny tsena eny an-toerana fa any lavitra mihitsy no ivarotan’ireo mpangalatra ny vokatra, raha ny filazan’ny tantsaha iray. Nilaza mantsy io mpamboly io fa manara-maso ny entany very eny amin’ireo tsena eny amin’ny manodidina izy. Midika izany fa avy eny an-toerana ihany ireo mpangalatra ka efa mahafantatra hatramin’ny tsiambaratelon’ny loko izay atentina amin’ireo vokatra.